Amụma nzuzo - Sendfiles.online
Zipụ faịlụ ezoro ezo
Daalụ maka iji Sendfiles.online!
N’okpuru, ị ga-ahụ ntụgharị okwu siri ike nke usoro ọrụ anyị na Bekee yana amụma nzuzo anyị na Bekee maka akụkụ iwu, ha abụọ na-etinye naanị na Bekee.
Nzuzo gị dị anyị mkpa. Ọ bụ iwu nke Sendfiles.online ịkwanyere nzuzo gị gbasara ozi ọ bụla anyị nwere ike ịnakọta n'aka gị na weebụsaịtị anyị, https://sendfiles.online, yana saịtị ndị ọzọ anyị nwere ma na-arụ ọrụ.
Anyị na-arịọ maka ozi nkeonwe naanị mgbe anyị chọrọ ya n'ezie iji nye gị ọrụ. Anyị na-anakọta ya site n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ ziri ezi, gị ihe ọmụma na nkwenye. Anyị na-emekwa ka ị mata ihe kpatara anyị ji anakọta ya na otu esi eji ya.
Anyị na-ejigide ozi anakọtara ruo ogologo oge ọ bụla iji nye gị ọrụ ịchọrọ. Kedu data anyị chekwaa, anyị ga-echebe n'etiti ụzọ azụmahịa dị mma iji gbochie mfu na izu ohi, yana nnweta na-enweghị ikike, mkpughe, co
Anyị anaghị eso onye ọ bụla mara ozi gbasara ọha ma ọ bụ ya na ndị ọzọ, belụsọ mgbe iwu chọrọ.
Are nweere onwe gị ịjụ arịrịọ anyị maka ozi gbasara gị, na nghọta anyị nwere ike ọ gaghị enwe ike ịnye gị ụfọdụ ọrụ ịchọrọ.
Continuedga n’ihu webụsaịtị anyị ga-ahụta ka ịnabata omume anyị n’ihe gbasara nzuzo yana ozi nkeonwe. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara otu anyị si eji data onye ọrụ yana ozi nkeonwe, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Iwu a dị irè dịka nke 6 June 2019.
SFO.to © 2022 Sendfiles.online v1.49 | 87,748 faịlụ zitere kemgbe 2020